Dhaxal Sugaha Boqortooyada UK Ee Prince William Oo Shaaciyey Sababta Aanu Waligii U Taageerin Man United & Chelsea - Gool24.Net
Dhaxal Sugaha Boqortooyada UK Ee Prince William Oo Shaaciyey Sababta Aanu Waligii U Taageerin Man United & Chelsea
Amiirka Boqortooyada UK ee Prince William ayaa sharraxaad ka bixiyey sidii uu ku noqday taageere kooxda Aston Villa ah, taas oo uu soo bilaabay xilligii uu ku jiray Jaamacadda Cambridge.
Prince William ayaa caan ku ah inuu soo dhex fadhiisto garoomada, gaar ahaan kulamada ay ciyaarayso Aston Villa iyadoo ay dadka qaarkood kooxdaba ku sifeeyaan inay tahay naadigii Prince William.
Markii ay Axaddii ka badbaadday inay dib ugu noqoto heerka labaad, Prince William waxa uu is hayn kari waayey farxad, waxaanu baraha bulshada kusoo daabacay dareenkiisa iyo sida uu taageeraha ugu yahay naadiga, waxaanu tilmaamay in aanu marnaba shaki ka gelin in Villa xili ciyaareedka dambe kasii mid ahaan doonto kooxaha Premier League.
Barnaamijka uu soo saaro Peter Crouch ee ka baxa BBC-da ee magaciisa la yidhaahdo That Peter Crouch Podcast ayaa la xidhiidhay Prince William, waxaana la weydiiyey sida uu ku noqday taageeraha kooxda Aston Villa, waxaanu yidhi: “Kaliya sannadihii yaraa ee ugu dambeeyey ayuun baan u arkay Villa inay tahay kooxdayda. In badan ayaan daawadaa, waxaan la socdaa xogteeda, usbuuc walbana waan daawadaa ciyaaraheeda.
“Markii ugu horreysay ee aan taageeray waxay ahayd ciyaar FA Cup ka tirsanayd oo ay la ciyaaraysay Boldon, waxaan xasuustaa inaan fadhiyey garoonka dhexdiisa. Waxay markaas da’daydu ahayd 12 ama 11 jir. Waxaan arkay taageereyaasha Villa, waanan jeclaaday.”
Prince William waxa uu shaaciyey in waqtigaas uu qof walba taageerayay Manchester United ama Chelsea, laakiin isagu uu Villa doortay, waxaanu yidhi: “Waqtigaas, maan doonayn inaan taageero Man United ama Chelsea oo sidii iskuulka uu qof walba u taageerayay.
“Waxaan ka helay ogaanshaha in mar horbea ay Villa taariikh lahayd, kuna soo guuleysatay koobab Yurub ah. Waxaan si dhab ah u dareemay inaan kooxda ku xidhanahay in ka badan inta aan daawado kooxaha kale. Villa waxay i dareensiisay inay tahay kooxda dhabta ah ee ka dhisan Midlands.”